Other News | Artist Khabar | Page 3
Other News	पार्टि प्रवेशमा आर्टिस्ट: सुन्दर खनालको एक ब्यड्ग्य भिडियो	पुस, काठमाडौं । नेपाल चलचित्र क्षेत्रकी चर्चित नायिका रेखा थापा केहि समय अघि राप्रपामा प्रवेश गरिन् । यो भन्दा अघि माओवादीमा प्रवेश गरेकी रेखाले अहिले राप्रपा आफुलाई मन पर्ने पार्टि भएको बताउदै राप्रपामा राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाको हातबाट टिका र माला लगाउदै पार्टिमा प्रबेश गरिन् ।
हुनत यसअघि पनि रेखाथापा माओवादीमा जाँदा निकै चर्चा..	‘चोखो माया दिँदा पनि आँखा भरी आँशु’, म्युजीक भिडियो छायांकन सम्पन्न, भिडियो छिट्टै आउने	पुस, काठमाडौं । गायिका मनु अधिकारीको एकल स्वरमा रहेको चोखो माया दिँदा पनि बोलको एकल गीतको म्युजीक भिडियोको छायांकन सम्पन्न भएको छ । भक्तपुर पाईलट बाबा आश्रमको पेरिफेरीको मनोरम दृश्यहरुमा छायांकन भएको यस म्युजकी भिडियो यसैसाता बजारमा आएको बताइएको छ ।
गीतकार सुर्यश्रेष्ठको शब्द र शनम पुरुषको संगीत रहेको यस गीतको भिडियोमा गीतकार सुर्य..	काठमाडौंको बानियाटारमा ‘तारेमाम रोधिघर’ उद्घाटन (फोटो फिचर)	पुस, काठमाडौं । काठमाडौंको बानियाटारमा तारेमाम रोधीघर उद्घाटन गरीएको छ । तिनबर्ष अघि देखी सञ्चालनमा आएको तारेमाम रेष्टुरेष्ट अब रेष्टुरेन्ट सँगसँगै रोधिघर पनि सञ्चालन हुने भएको हो ।
शुक्रबार एक कार्यक्रमका बिच रोधिघरको उद्घाटन गरीएको थियो । बिभिन्न आर्टिस्टहरुको उपस्थितीमा रोधिघरको उद्घाटन गरीएको थियो । लामोसमय देखी उपस्थित..	‘तिम्रो न्यानो काखमा मर्न पाए हुन्थ्यो’, बिना पुनको नयाँ गीत सार्वजनिक (भिडियो)	पुस, काठमाडौं । बिना पुनको प्रस्तुतीमा रहेको 'तिम्रो न्यानो काख' बोलको लोक तथा दोहोरी गीत सार्वजनिक गरीएको छ । गायक डिल्ली परियार र गायिका कल्पना बि.सीको स्वरमा रहेको यस लोकगीतमा डिल्ली परियारले नै लय तथा शब्द भरेका छन् ।
बिरेन्द्र ओलीले निर्देशन गरेको यस गीतको भिडियोलाई बासु बरालले छायांकन गरेका हुन् भने दिपक बिष्टले सम्पादन गरेका हुन् ।..	५० आर्टिस्ट र्‍याम्पमा उत्रिने, सहभागि हुँदैछन् पुराना देखी नयाँसम्म	पुस, काठमाडौं । आउँदो पुस १४ गते काठमाडौंमा सेलिब्रेटी रनवे हुने भएको छ । सामाजिक गतिविधिमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्य स्वरुप आयोजना गर्न गर्न लागिएको यस रनवेमा चलचित्र क्षेत्रका ५० भन्दा बढी आर्टिस्टहरुले सहभागिता जनाउँदैछन् ।
अभिनेत्री गौरी मल्ल र निर्माता पुनम गौतमको कम्पनी पुनम ईन्टरटेन्मेन्टले आयोजना गर्ने यस र्‍याम्पमाको..	रिदम राईको नयाँ गीत ‘जीन्दगी एउटै’ (भिडियो)	पुस, काठमाडौं । गायक रिदम राईको नयाँ गीत सार्वजनिक गरीएको छ । जीन्दगी एउटै बोलको भिडियो सहितको गीत परेली फिल्मस्को युट्युवबाट सार्वजनिक गरीएको हो ।
गीतका रिदमले नै शब्द भरेका छन् भने निलम रोजु राईको संगीत रहेको छ । माया प्रेमको कथामा समावेश यस गीतको भिडियोलाई मिलन कार्कीले निर्देशन गरेका छन् । भिडियोलाई गजेन्द्र लिम्बुले खिचेका हुन्..	विल्सन विक्रम हिन्दी चलचित्रमा, आयषा टाकियाको जोडी बने	मंसिर, काठमाडौं । नेपालका चर्चित हाँस्य कलाकार विल्सन विक्रम राईले हिन्दी चलचित्रमा अभिनय गरेका छन् । १५ सिनका लागी चलचित्रमा अनुबन्धित भएका बिल्सन पर्दामा आयषा टाकियाको जोडी बनेका छन् । विल्सनले अभिनय गरेको चलचित्रको निर्माण युनिटको आग्रहमै नाम भने खुलाइएको छैन ।
१० दिनसम्म सुटिङमा रहने विल्सनलाई केही समयअघि नेपालमा कन्सर्ट गर्न..	नरेन्द्र मोदीको कथामा बनेको चलचित्र ‘मोदी का गांव’ को फर्स्ट लुक सार्वजनिक	मंसिर, काठमाडौं । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको कथामा बनेको भारतीय चलचित्र ‘मोदी का गांव’ को फर्स्ट लुक सार्वजनिक गरीएको छ । नरेन्द्र मोदीजस्तै देखिने बिजनेशमेन विकास महंते यस चलचित्रमा मुख्य भुमिकामा छन् ।
चलचित्रलाई सुरेश झाले निर्माण तथा निर्देशन गरेका हुन् भने छायांकन बिहार र मुम्बईमा गरीएको छ । चलचित्र २ घण्टा १५ मिनेटको..	पार्टि प्रवेश बिशेषः रेखा थापा र कमल थापाले केके बोले ?	मंसिर, काठमाडौं । नेपालीकी चर्चित नायिका रेखा थापाले सोमबार राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टिमा प्रवेश गरीन् । राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले टिका तथा माला लगाइदिएर पार्टिमा प्रवेश गराएसँगै उनी अब पुर्णरुपमा राजनितिमा सक्रिए हुने देखिएको छ । आँफु हिन्दु नारी भएकोले पनि आफुले राप्रपा पार्टि राजेको उनको भनाई छ । यसका साथै आज पार्टि प्रवेश..	प्रमोद खरेलको ‘संगै जिउने मर्ने कशम’ म्युजीक भिडियो सार्वजनिक	मंसिर ७, इटहरी । चर्चित गायक प्रमोद खरेलको स्वरमा रहेको गीत 'संगै जिउने मर्ने कशम'को म्युजिक भिडियो सार्वजनिक गरीएको छ ।
पुर्व क्षेत्रलाई सुटिङ्ग स्थल रोज्दै भेडेटार, धरान र इटहरीमा छायांकन गरिएको उक्त भिडियोलाई डि थ्री प्रोडक्सन नेपालले बजारमा ल्याएको हो ।
ूसंगै जिउने मर्ने कसमू बोलको गीतमा चर्चित गायक प्रमोद खरेलको आवाज रहेको छ भने..	Pages:«1234567...40»
Recent Posts	आर्टिस्ट फस्टः पहिलो मोबाइल नोकिया ८३१० मोडल, पहिलो सवारीसाधन साईकलः हेमन्त शर्मा